Afghanistan : Atrikasa voalohany amin’ny fitorahana blaogy tao Kabul · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Avrily 2008 20:25 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Shqip, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, Español, English
Nahatontosa ny atrikasa voalohany teo amin'ny tantaran'izy ireo ny Fikambanan'ny Mpitoraka Blaogy ao Afghanistan [Afghan Association of Blog Writers] (Afghan Penlog) rehefa nisedra tsy fahampian'ny vola sy ny herin'aratra. Tamin'ny 3-4 Aprily no natao tao Kabul io atrikasa io niaraka tamin'i Nasim Fekrat sy Masoumeh Ebrahim [Fa], mpitoraka blaogy mavitrika avy any Afghanistan.
Izao no nolazain‘i Nasim Fekrat [Fa] :
Misy sary sy tatitra hafa ao amin'ny Civil Movement of Afghanistan.
Ny fampiasana ny aterineto hampandrosoana ny fahafahana maneho hevitra sy ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety no resahin‘i Manzarra, nianatra nitoraka blaogy tamin'io atrikasa io.
Zarain‘i Mokhtar Pedram [Fa], mpanao gazety, amintsika kosa ny traikefany :
Zava-baovao ao Afghanistan ny fitorahana blaogy, hoy i Safeh [Fa], ary izay ny mpampianatra vao nianatra izany.
Ny atrikasa toy izao, hoy i Zartosht [Fa] angamba no dingana lehibe indrindra amin'ny fanaovan-gazety ao Afghanistan.
ehehehehh milay hoa ny blaogy!!
09 Avrily 2008, 23:38
Hiresaka koa -> jogany